Talohan'ny nahafatesan izy mivady Ramatoa Jane Collins sy ny Rev Mounir Aziz Daoud dia nametraka didy miafina izy ireo amin'izay olona handimby ny asa izay efa natomboka. Mino izahay fa fitarihan'ny Fanahy Masina no nahatonga azy ireo nanao izany. Kanefa nohon' ny fitiavan-tena tamin'ireo olona sasany dia natao izay nandroahana an ireo olona voalaza ao amin'io didy miafina io tsy ho mpikambana amin ito fiangonana ito. Raha tiantsika ny hiverenan'ny fifohazam-panhy tahaka ny tany aloha dia ekeo ny fiterihan' ny Fanahy Masina.
Mifanohitra amin' izay no safidin' ny sasany ka ny Pastora RATAFY Léon no natao Filohan'ny Filan-kevi-pitantanana sady miandraikitra ny Filohan'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy nanomboka ny taona 2003 ka hatramin'izao (2019)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiangonana_Jesosy_Mamonjy&oldid=998225"
Voaova farany tamin'ny 22 Oktobra 2020 amin'ny 12:28 ity pejy ity.